CrockPot Beef Stew - Fomba Fanamboarana
salady maitso misy resipeo voankazo sy voanjo
mahandro hamam-boninkazo ao anaty roaster
lasopy laisoa fikotranana laisoa mahandro mahandro
CrockPot Beef Stew dia iray amin'ireo sakafo fisakafoanana miadana maharitra tiako indrindra. Mameno sy matsiro miaraka amina henan'omby, karaoty, ovy ary pitipoà (na tsaramaso maintso). Raha ny sakafo fampiononana mahafa-po no resahina, ny henan'omby mahandro henjana no tena farany!
Mba hamenoana ny sakafo, ny tena ilainao dia ny manampy amin'ny lafiny iray bisikileta dibera mora na mofo katsaka muffins voahosotra dibera. Na, arotsaho amin'ny mofo vita an-trano be dia be izy io mba hanoboka anaty gravy. Ho any an-danitra daholo ny tsirairay!
Akora ilaina amin'ny tsindrin-tsakafo miadana
Ny akora ho an'ity fikotranana henan'omby CrockPot ity dia henan'omby na henan'omby, legioma faka toy ny ovy, karaoty ary fresh ary pitipoà na tsaramaso.
Ny hena tsara indrindra hahandroana henan'omby dia chuck steak! Mila manapaka azy ho cubes ianao. Chuck dia hena henjana nefa feno tsiro izay avy amin'ny soroka sy ny faran'ny biby. Izy io dia mety tsara ho an'ny Crock Pot Beef Stew na pot roast (endrika mitovy amin'ny soroka henan-kisoa izay ampiasaina hanamboarana azy Crock Pot Nisarika Kisoa ). Izy io dia mitazona ny tsirony manankarena sy matsiro ary lasa mamy sy malefaka amin'ny fork eo ambanin'ny hafanana ambany sy miadana ao anaty vilany.
Sakafo hen'omby mahandro mahaliana: Ny tena mahatonga ny masaka hahandro azy dia ny anana matsiro, ny ron-kena hena matevina ary ny zava-manitra. Mba hanomezana fahasarotana bebe kokoa ny lovia dia eritrereto ny amboarina miaraka amin'ny divay mena ny henan'omby CrockPot. Arosoy ny kaopy misy divay maina mahavoky fo, toy ny Cabernet Sauvignon na Merlot, kaopy amin'ny rononon'omby ary ampiasao izany handoroana ny lapoaly izay nampiasanao tamin'ny fandefasana ny hena. Azonao atao koa ny manampy amin'ny holatra bokotra sasany.
Fomba fanamboarana henan'omby amin'ny Crock Pot
Na dia tianay aza ny manamboatra a fatana hena ambony fatana kilasika , ity fomba fahandro mora miadana ity dia azo avela hahandro mandritra ny androm-piainanao! Ny henan'omby Crock Pot dia miaraka amina dingana vitsivitsy monja ary malefaka be ilay hen'omby.
Atsipazo ao anaty fangaro vovoka-tongolo lay ny hen'omby ary arotsaka amin'ny menaka oliva amin'ny andiany. Aza manakorontana ny lapoaly. (Azonao atao ny mandingana ity dingana ity fa ny manaloka dia manome tsiro be dia be amin'ny laoka).
Atsofohy amin'ny lovia iray ihany ny tongolo (ampiasao laoka na divay mena mba hanampiana deglaze ary ampio sombina volontany amin'ny vilaninao).
Ampio amin'ny vilany tsy miadana ny zava-drehetra (a Vilany crock ) ary mahandro mandra-pitombon'ny hen'omby. Atsofohy amin'ny pitipoà alohan'ny hanompoana.
Mandra-pahoviana no handrahoana henan'omby any Crock Pot: Ny henan'omby Crock Pot dia karazan-tsakafo iray voafaritra sy-manadino. Andrahoy amin'ny avo mandritra ny 4-5 ora, na amin'ny ambany 8-9 mandra-pahatonga ho malemy ny hena. Azonao atao ny mamela azy mafana mandritra ny adiny iray na mihoatra raha ilaina izany.
Ho an'ny hen'omby henjana ao anaty vilany Crock: Mampiasà vovo-katsaka aho (mitovy zana-katsaka sy rano) ary ampidiriko amin'ny farany. Avelao izy hahandro 10 minitra eo ho eo aorian'ny fampidirana ilay slurry mba hialana amin'ny tsiro starchy.
Manolotra henan'omby miaraka amina mofo crusty na horon-tsakafo an-trano ho an'ny sakafo tonga lafatra!
Sisan'ny CrockPot Beef Stew
Ny sisa tavela dia hitazona 3-4 andro eo amin'ny vata fampangatsiahana.
Azonao atao ve ny mangatsiaka henan'omby: Ho faly koa ianao hahafantatra fa mihamangatsiaka tokoa ny CrockPot Beef Stew, koa manaova betsaka ho an'ireo sakafo fisakafoanana haingana. Avelao ny sehatr'adiny tokony ho iray santimetatra hanitarana fitoeran-plastika, ary hitazona mandritra ny efa-bolana ao anaty vata fampangatsiahana ny stew anao.
Akoho amam-borona - ankafizin'ny zanako vavy
Stew Beef Pot Instant - mora kely
Resipeo henan'omby - kilasika
Stew zanak'ondry (Stew irlandey) - mamy fo!
Sopan-kisoa hen'omby - salama sy matsiro
Fotoana fanomananaroa-polo amby minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo4 ORA Fotoana manontolo4 ORA roa-polo amby minitra Fanompoana6 servings MpanoratraHolly Nilsson CrockPot Beef Stew dia iray amin'ny saka-saka iray-saka tiako indrindra. Mameno, matsiro, tian'ny fianakaviana foana izy io, ary mora be ny miomana mialoha. pirinty Pin
▢rOA kilao henan'omby na mihinana hen'omby
▢1 tongolo voatetika
▢1 kapoaka ranom-boankazo toy ny V8
▢4 kaopy ron-kena
▢½ sotrokely thyme na sprig 2 vaovao
▢1 sotrokely rosemary maina na sprig vaovao 1
▢3 kaopy ovy voahitsakitsaka sy cubed
▢rOA kaopy karaoty tapaho ho 1 santimetatra
▢1 kapoaka tahon-seleria tapaho ho 1 santimetatra
Atambaro ny lafarinina, ny vovoka tongolo lay ary ny sira sy ny dipoavatra mba hanandrana. Atsipazo amin'ny fangaro lafarinina ny hen'omby.
Boribory amin'ny hena oliva ny hen'omby sy ny tongolo. Ampio ny lasopy sasany amin'ny lapoely ary esory ny sombin-tsiranoka rehetra.
Ampio ny akora rehetra, afa-tsy ny pitipoà sy ny vovo-katsaka ao anaty vata mangatsiaka 6QT.
Andrahoy amin'ny adiny 4-5 ambony na amin'ny 8-9 ora ambany na mandra-pahalemin'ny hen'omby.
Afangaroy amin'ny katsaka 2 ny sisan-katsaka. Atsofohy ao anaty masaka kely mba ho matevina (mety tsy mila ny fangaro rehetra ianao). Manampy pitipoà.
Sarony ary mahandro 10 minitra. Manaova sira sy dipoavatra.
Kaloria:480,Karbohidraty:29h,Proteinina:36h,Tavy:24h,Tavy voky:8h,Cholesterol:104levitra,Sodium:503levitra,Potasioma:1622levitra,Fibre:5h,Sugar:5h,Vitamina A:7545IU,Vitamina C:31.4levitra,Kalsioma:94levitra,Vy:7.6levitra
Teny lakileamboarina hen'omby Mazava ho azyOmby, Main course, Cooker miadana masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .